Iyo iOS 16 Pfungwa Inounza Kuparadzana Maonero uye Mamwe Anoshanda Widgets ku iPhone | IPhone nhau
Iyo iOS 16 pfungwa inounza Split View uye mamwe anoshanda majeti kune iyo iPhone
Ngirozi Gonzalez | | iOS 16, Noticias
Gore idzva riri kupera uye pamwe naro nhevedzano yezviitiko zvakaratidza zvitsva zveBig Apple padanho resoftware uye hardware. 2022 ichauya yakatakura zvigadzirwa zvitsva uye masisitimu anoshanda. Pakati pavo tichaona iOS16, iyo ichaunzwa kuWWDC 2022, Apple's developer conference, iyo ingangoita kunge iri mu telematic fomati zvakare kunyangwe pasati pasisina kusimbiswa kwepamutemo kubva kuCupertino. Nekudaro, kunyangwe kwasara mwedzi mitanhatu yeiOS 16 chiitiko chavanofungidzira kusvika kweSplit View kune iPhone, zvitsva mumajeti uye nzvimbo itsva yekutonga pamwe nekugadzirisazve majeti ku iPhone.
1 Kuchine iOS 16 ... asi isu tatova nemafungiro ekutanga
2 Zvimiro zvingaita mutsauko nemamwe iOS
Kuchine iOS 16 ... asi isu tatova nemafungiro ekutanga
Iyo inonyanya kubatsira iOS yenguva dzese. Iyi ndiyo iOS 16. Iti mhoro kune mamwe magadzirirwo ane anodyidzana mawidget uye zvidhori, zviri nyore kuita zvakawanda, Crypto Wallet yakavakwa muApple Pay, Nguva dzose-Iri-On-Display neSmart Context, iyo itsva Control Center, pamwe nekuita zvirinani, kugadzikana uye nguva yebhatiri.
Apple inoshanda masisitimu inogara ichisanganisira huru nhau dzinoita mutsauko neayo apfuura. Muchokwadi, WWDC inogara iri chiitiko chinotenderera software uye zvese zvinoshanda zvakabatanidzwa kutanga kupa beta yeaya masisitimu kune vanogadzira. Chikumi anotevera tichaona yekutanga beta ye iOS16, iyo inoshanda sisitimu yayo pfungwa dzekutanga dzakatotanga kuonekwa. Mune ino kesi isu tine iyo concepto yakagadzirwa nemushandisi @ Kevin0304_.
Imwe yemabasa ekutanga ayo inosanganisa mune iyo pfungwa ndeye Kupatsanura Kuona, izvo zvatinoziva zvakanyanya muPadOS, izvo zvaizobvumira iyo iPhone kutora imwe nhanho mukubudirira nemidziyo uye yavo yakawanda. Nekuda kwebasa iri tinogona kuve nemaapuro maviri akavhurwa panguva imwe chete akakamurwa nepakati pechidzitiro. Pamusoro pezvo, kuvandudzwa kwezvinhu zvakawanda kwaizobvumira maapplication anoyangarara kutangwa anogona kudyidzana nemamwe maapplication akavhurika kumashure. Dambudziko rakakura tichifunga nezvehukuru hweiyo iPhone skrini.
iOS 15.2: Idzi ndidzo dzese nhau dzechizvino-zvino
Zvimiro zvingaita mutsauko nemamwe iOS
El new control centre yaizounza zvinhu zvakachinjika pachinzvimbo cheese angori masikweya ayo aizogara muhupamhi hwese kwescreen. Mukuwedzera paizova nea SmartContext iyo yaizopa mapfupi anoenderana nekurudziro yekushandisa kumushandisi neIOS 16. Kufanana nenzvimbo yekudzora, iwo majeti aizogadziridzwa zvakare aine akawanda uye akawanda anoshanda uye nekudyidzana. Semuenzaniso, kuti Apple Music playback control inogona kuitwa pachitubu pane kuwana nzvimbo yekuzivisa kana nzvimbo yekudzora, semuenzaniso.
Inobatanidzawo bitcoin manejimendi kuburikidza neApple Pay pamwe nehurongwa hwe shandura iOS 16 icons kuburikidza ne icon packs. Nenzira iyi isu taigona kudzoreredza zvidhori zvekare iOS kana kupa imwe yakawedzera kugadzirisa kune yedu kifaa. Uye, pakupedzisira, nyevero inogumbura yekuti bhatiri redu riri kupera zvakare rakabviswa, iro risisiri pop-up bhokisi rinokanganisa uye rinogumbura mushandisi kuti aoneke muchimiro chemutsetse munzvimbo yekuzivisa inobvumira kupindirana nayo. activate simba rekuchengetedza maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo iOS 16 pfungwa inounza Split View uye mamwe anoshanda majeti kune iyo iPhone
Gore rega rega ndiwo akafanana akachena pfungwa uye pakupedzisira pavanotangisa IOS vhezheni inongove ne5% yezvavanoratidza mumifungo uye yakafanana IOS inofinha iyo inomanikidza vazhinji vedu kuenderera mberi nekushandisa android.
Maitiro ekujoinha maviri kana anopfuura mafoto pa iPhone kana iPad
Maitiro ekuvhura Spotify zvinongedzo paApple Music (uye zvinopesana) neMusicMatch